ဒေါ်မို့မို့ဝင်းပိုင်စက်ရုံလား? အစိုးရပိုင်စက်ရုံလား? ~ ဒီမိုဝေယံ
မန္တလေးတိုင်း ၊ ကျောက်ဆည်မြို့ နယ်ရှိ အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် အမှတ်(၃၃) ဘိလပ်မြေစက် ရုံသည် ဒေါ်မို့ မို့ ဝင်းပိုင်စက်ရုံလား? အစိုးရဌာနပိုင် စက်ရုံလား မသိဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အကြောင်းအရင်းမှာ ဒေါ်မို့မို့ဝင်းသည် ၄င်းစက်ရုံတွင် (စိတ်မှူး) ရာထူးဖြင့် နေ့ စဉ်ဌာနမှ ထွက်ရှိသော ဘိလပ်မြေတန်-၅၀၀ ကျော်ခန့် အား ဘိလပ်မြေရရှိသူ ကိုယ်စားလှယ်များအား သတ်မှတ် ခွဲတမ်းများအား ဖြန့် ဝေပေးရကြောင်း ၊ ယင်းသို့ ဖြန့် ဝေရာ တွင် ဒေါ်မို့မို့ဝင်းမှ သတ်မှတ်ခွဲ တမ်းများ အား ဖြန့် ဝေပေးရကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဖြန့် ဝေရာတွင် ဒေါ်မို့မို့ဝင်း ထံသတ်မှတ်ခွဲတမ်း ရရှိသူကိုယ်စား လှယ်များမှ ၁တန်လျှင် (၅၀၀) ကျပ်နှုန်းအားတရားဝင် သဘောပေးရသည့်အပြင်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ယာဉ်များဖြစ်သည့်၈ဆ/၉၆၀၆(၁၀)ဘီး ၊ ၂၈/၉၈၁၁(၁၂)ဘီးယာဉ်နှင့် ၄ဃ ၊၄၆၂၅(၂၂)ဘီးယာဉ် တို့ ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ဘိလပ်မြေသယ်ယူသွားလိုသည့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်နေရာများသို့ယာဉ်ဌားရမ်း မည်ဆိုလျှင် ဘိလပ်မြေခွဲတမ်းအပြည့် အဝပေးပြီး ၊ ၄င်းတို့ယာဉ်များဖြင့်မဌားရမ်းလိုဘဲ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၄င်းတို ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ယာဉ်ဌားရန်မည်ဟု ပြောဆိုပါက ခွဲတမ်းအား အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ အပြည့် အဝမပေးဘဲ ရက်ရှည်အချိန်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် ဘိလပ်မြေထုတ်ယူလိုသည့်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ဒေါ်မို့မို့ဝင်း၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ခရီးစရိတ်ထောင်းပြီး အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေ ရကြောင်း ဒေါ်မို့မို့ဝင်း၏ ယာဉ်ဌားရမ်းခဈေးနှုန်းများမှာလည်း ပြင်ပဈေးနှုန်းများထက် ကြီးမြင့်နေကြောင်း သို့ ဖြစ်၍ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ၄င်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ သည်ဒေါ်မို့မို့ဝင်းပိုင်စက်ရုံလား? အစိုးရပိုင်စက်ရုံလား? မသိဖြစ်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။